Finland: Xiisad colaadeed oo ka taagan tuulo ay Soomaalidu ku badatay | Somaliska
Xiisad colaadede oo salka ku haysa cunsuriyad ayaa ka dhalatay tuulo lagu magacaabo Lieksa ee dalkaasi Finland. Xiisadaan oo ka dhextaagan Soomaalida iyo dadka deegaanka ayaa dhalisay in wiil Soomaali ah midi lagu dhaawacay halka mid Finnish ah sidoo kale wax la gaarsiiyay. Xiisadaan ayaa ka dhalatay ka dib markii la sheegay in hadalo been abuur ah laga faafiyay Soomaalida oo la sheegay in ay qaataan lacago taageero ah oo fara badan isla markaana dowladu ay siiso adeegyo dheeri ah oo aysan helin dadka deegaanka.
Dhalinyaro ka tirsan kuwa deegaanka ayaa bilaabay falal cunsuriyad ah oo ka dhan ah soo galootiga iyadoo hada Soomaalidu ay sheegeen in ay la soo daristay cabsi weyn. Tuuladaan oo ay ku nool yihiin shacab gaaraya 12000 ayaa waxaa soo dagay 220 Soomaali ah taasoo keentay in ay aad uga dhexmuuqdaan shacabka.
Booliska ayaa sheegay in xiisadaan ay tahay mid ay horey u arkeen bilowgii sanadkii 1990 iyadoo dadku ay qaateen shaki been ah oo ka dhan ah soo galootiga. Gudoomiyaha jaaliyada Soomaalida ee magaalada Lieksa oo lagu magacaabo Muqtar Moalin Nuur ayaa sheegay in uusan isagu la kulmin wax cunsuriyad ah isla markaana kuwa dhibaatada ku dhacdo ay yihiin kuwa kalaabyada aada.
Tuuladaan oo la sheegay in sanadihii dambe ay shaqo la’aan baahsan ka jirtay isla markaana dadku ay bilaabeen in ay ka guuraan ayaa waxaa kor shacabkeeda u qaaday Soomaalida cusub oo halkaasi soo buux dhaafisay taasoo keentay in si weyn looga dareemo jookitaankooda.
Asc Tuulada Jimcaale ma 1200 ayaad ka wadaa ayaa degenaa haddii Soomaali 220 ka dhex muuqdeen oo 12000 eber ayaa saa,id ku ah mhadsanid Asc
October 18, 2011 at 01:47
Ruuxa wata magaca ah MAGACA qudhaada su aashaada waxaa ku jira qalad waayo 1200 hadii ay noqdaan swidhisku somaliduna ay noqdaan 220 wili waxaa aad u muuqda waa swidishaka ee adiguna sidaan miyaad ka waday
soomalida ayaa ah 220 halka swidishku ay ka yihiin 120 saas ayaad ka waday oo hal eber ah ayaa adna kaa raacday miyaa????
ARINTAA SOOMAALIDA KU HEEYSATA TUULADDA KA MID AH FINLAND, MAR HADDII SIDA GUDOOMIYAHA JAALIYADDA SHEEGAY TAGAY SOMALIDA ALLAHA HANUUNIYO, WAAYO DADKA KALAABADDA AADA AYAA LA KULMA AYUU YIRI CUNSIRIYADDA MAXAA GEEYEY KALAAB WAABA ISLAAME, AAD BAAN UGU FARAXSANAHAY IN LAGU BAHDA KALAAB IYO MEELAHA QASHINKA AAY TAGEEEN